Jesu Ndiye Wakakwegura Pamazuva ake Anogara kare nakare nokusingaperi
churchages.net » Shona » Zvidzidzo zveBhaibheri » Jesu Ndiye Wakakwegura Pamazuva ake Anogara kare nakare nokusingaperi
Jesu Ndiye Wakakwegura Pamazuva ake Anogara kare nakare nokusingaperi
Kuzara kwovuMwari - Ndiani anonzi Wakakwegura Pamazuva ake anogara kare nokusingaperi?
I TIMOTIO 3:16 Hakuna ungaramba kuti chakavanzika chekunamata chikuru kwazvo, chokuti: iye Mwari wakaratidzwa panyama wakaruramiswa pamweya wakavonekwa nevatumwa, wakaparidzwa pakati pavahedheni, wakatendwa panyika wakakwidzwa mukubwinya.
Hazvisi nyore kuti vanhu vanzwisise Mwari nekuti haaonekwi.
Chakavanzika chinosanganisira kuedza kusanganisa hunhu hwakasiyana pamunhu mumwechete.
Mambo vangave zvekare muranda here?
Mwari angave munhu here?
ZVAKAZARURWA 10:7 Asi namazuva enzwi remutumwa wechinomwe kana vodo kuridza, zvakvanzika zvaMwari zvichapedziswa, sezvaakaparidzira varanda vake, ivo vaporofita.
Chakavanzika chemutumwa wechinomwe kana kuti nhume chaive chekuburitsa pachena kunzwisisa kuri nani kwekuzara kwehuMwari.
Tiriniti izwi risiri muBhaibheri. Saka kuvimba paizwi risiri muBhaibheri hakungatibatsiri kuti tinzwisise Bhaibheri zviri nani.
Ipfungwa isinganzwisisiki yekuti pane kufanana pakati paMwari mumwechete meVanhu vatatu, Baba, Mwanakomana naMweya Mutsvene. Umwe neumwe wevanhu vakasiyana ava ndiMwari, asi hakuna vanaMwari vatatu. Hakuna mufananidzo wakanyatsojeka, zvichireva kuti hatinzwisisi chikamu ichi chezvakavanzika zvaMwari. HuMwari hunoramba huri chakavanzika kune avo vanotevera Tiriniti, dzimwe nguva umwechete dzimwe nguva Vatatu. Bvunza munhu anotevera Tiriniti kuti zita raMwari ndiani vanokudzosera zvakare kumazita ezvinzvimbo aBaba, Mwanakomana naMweya Mutsvene, sezvavanoita parubhabhatidzo rweMvura. Asi mazita eZvinzvimbo matatu haasi zita. Saka kunyangwe zita raMwari rinova risinganzwisisiki sezvo pane Vanhu Vatatu asi hapana anokwanisa kubuda nezita rimwechete rekutsanangura vese vatatu.
Gwaro rimwe rinoshandiswa kutsigira Tiriniti riri kuna Danieri.
DANIERI 7:9 Ndikaramba ndakatarira kusvikira zvigaro zveushe zvagadzwapo, mumwe akakwegura pamazuva ake akagarapo; nguo yake yakanga yakachena sechando, uye bvudzi remusoro wake rakanga rakaita samakushe akanatswa; chigaro chake choushe chakanga chiri mirazvo yomoto.
10 Rwizi rwomoto rwakanga rwuchibva pamberi pake; zviuru nezviuru zvakanga zvichimubatira, uye pamberi pake pakange pamire zviuru zvine gumi zvezviuru zvine gumi; kutonga kukatanga, bhuku rikazarurwa.
DANIERI 7:13 Ndikaona pane zvandakaratidzwa usiku, ndikaona umwe akafanana neMwanakomana wemunhu achiuya namakore okudenga, akasvika kune akakwegura pamazuva ake, vakamuswededza pamberi pake.
Izvi zvinotaridzika seVanhu vaviri saka mavhesi aya anoshandiswa sehumbowo hweTiriniti.
Asi Gwaro iri rinoita serinoreva vanhu vaviri, kwete vatatu. Zvapupu zvaJehova vanotenda kuti muhuMwari mune vanhu vaviri, Baba neMwanakomana. Gwaro iri rinovatsigira nekupa humbowo mune zvavanotenda, kwete kubvumirana neTiriniti.
Zvinhu zviviri hazvigoneki kuti isu vanhu tizvitsanangure kubva pazviitiko zvinoitika zvega:
Kusika uye kudzikinura.
Murairo mukuru wefizikisi ndewekuchengetedza simba. Hatizivi kuti simba chii zvakare pasina ongororo yakamboitwa hatikwanisi kusika simba kana kuriparadza. Saka simba harikwanisi kugadzirwa. Big Bang inoedza kutsanangura kuti yunivesi yakabva kupi nekutaura kuti simba rese riri muyunivhesi rakasikwa kubva pachinhu chakaputika. Izvi zvinopikisana zvikuru nemurairo wefizikisi saka manyepo kana takazvitarisa nenzira yezvesainzi. Hatifaniri kuti tiri kuita nezvesainzi isu tichiita tsvagiridzo dzinopesana nemitemo yesainzi.
Saka hakuna murairo weSainzi, mukati meyunivhesi yedu, unokwanisa kutsanangura kusika.
Saka kusika kunokwanisa chete kutsanangurwa neMunhu ari kunze kweyunivesi yedu, anonzi Mwari. Uye hakuna vezvesainzi vanokwanisa kutsanangura kuti Mwari akazviita sei nekuti mutemo wefizikisi wechipiri unotiudza kuti mirairo yese yeSainzi inoita nezvekuora uye kudzoreredza simba kupfurikidza mishonga, kana kukwizana kwezvinhu uko kunoshandura simba rakakosha kubva muchinhu chinenge chichishanda chichiburitsa simba rinopisa iro risingatoreki zviri nyore kuti rishandiswe kuita basa rakakosha. Hushe hunosimuka huchidonha apo kubata nekushingirira kwevanhu kunosvika pakuperera mukukundikana. Vanhu vanokura vochembera vobva vafa. Makore edu mapfupi ekubudirira anozongoperera murufu nekuora. Zvinokwanisa kutora marita 20 000 emvura kukurisa kirogiramu rimwechete remupunga apo mvura yekudiridzira inodiridza yopwira.
Kushingirira kukuru nesimba rakawanda zvinofanira kuiswa mukuita chimwe chinhu kukunda simba ratinozowana kubva machiri.
Maawa mangani ekushingirira atinoisa pakugadzirira muchato zvichienzaniswa nemaawa mashoma anozotorwa nemuchato wacho?
Semuenzaniso, zvinotora simba rakawandisa kugadzira bhatiri pane simba rese ratinozowana kubva kubhatiri racho.
Tinovimba nezuva kuwana chiedza uye mudziya asi Nyika inogamuchira chikamu chimwechete pazvikamu 200 miriyoni zvesimba rezuva. Rimwe rese rinenge raendera 'pasina' kubva pamaonero edu simba parinopararira richienda munzvimbo dzisina chinhu richibva kuzuva hatikwanisi kuritora nekurishandisa. Pasimba rezuva rinorova nyika, ringangoite 1% chete ndiro rinoshandiswa nezvirimwa nemiti kushandura mvura nekabhoni dhayokusaidhi kuita chikafu. Ndicho chatinovimba nacho kuti tirarame. Hatikwanisi kugadzira chikafu chedu tega. Tariro yedu iri kuzvirimwa nemiti yemichero zvinowana simba razvo kubva kuzuva. Miti nezvirimwa zvinoita chakavanzika chisingakwanisi kutevedzerwa nedzatinoti nyanzvi dzedu dzesainzi. Kana tikakwanisa kunzwisisa chakavanzika ichi, tinokwanisawo kuita chedu chikafu kubva kusimba rezuva.
Saka Jesu paaive panyika, akaita chingwa chakabikwa nehove akapa chekudya kuvarume zviuru zvishanu vaivepo nevakadzi nevana. Chingwa chishoma chaivepo chemarofu mashanu chakapedzisira chawandisa chasvika marofu zviuru zvishanu. Akakwanisa kutendeutsa nekukunda murairo weSainzi zvinoshamisa.
MATEO 14:21 Vakanga vadya vaive varume vane zviuru zvishanu vakadzi nevana vasingaverengwi.
Akatora zvishoma zvaivepo zvemarofu mashanu echingwa akaburitsa marofu aidarika zviuru zvishanu.
Hapana akabvira akwanisa kuita izvi rini narini. Akafamba pamusoro pemvura zvino pakukwira kwake kudenga akafamba kukwira kumhepo. Hatikwanisi kutevera nhano idzi zvinoratidza kuti Ndiye aive Musiki uye aive pamusoro pemurairo wefizikisi. Akadzosa kuhupenyu muviri waRazaro waifanira kuva watoora zvichireva kuti anokwanisa kutendeutsa nekukunda mutemo wekuora.
Chimwe chinhu chisingakwanisi kutsanangurwa nevanhu idzikinuro kana kukanganwirwa kwezvivi.
Tinokwanisa kuedza chose kurarama zviri nani asi hatingararami tisina zvivi zvachose.
Zvakanaka zvedu hazvingabvisi zvakaipa zvedu.
Saka tingakunde sei zvivi zvedu, zvikuru sei, tingakunda sei rudo rwekutadza?
Izvi ndizvo zvakavanzika zviviri zvaMwari zvinoda kutsanangurwa.
ISAYA 43:1 Asi zvino zvanzi naJEHOVA, akakusika iwe Jacobo, akakuumba, iwe Israeri, Usatya hako, nokuti ndini ndakakudzikinura; ndakakudana nezita rako, uri wangu.
Saka muna Mwari mune hunhu hwakabatana hwekukwanisa kuita zvinhu zviviri: kusika nekudzikinura kana kuponesa .
Kwete Vanhu vaviri, asi Munhu mumwechete anokwanisa kuita zvinhu zviviri zvisingagoni kuitwa nevanhu. Mwari anotisika sezvo tisingakwanisi kuzvisika zvakare akatidzikinura sezvo tisingagoni kuzvidzikinura.
Akatidzikinura sei kubva kuzvivi?
REVHITIKO 16:8 Aroni zvino anofanira kukanda mijenya pamusoro pembudzi mbiri, mumwe mujenya waJEHOVA mumwe waAzazeri .
9 Zvino Aroni anofanira kuuya nembudzi yakabatwa nemujenya pamberi paJEHOVA, ndokuibaira chive chipiriso chezvivi.
10 Asi mbudzi yakabatwa nemujenya waAzazeri, inofanira kuiswa iri mhenyu pamberi paJEHOVA kuti ayananisire pamusoro payo, igoregedzwa iende kurenje, ive yaAzazeri.
REVHITIKO 16:15 Ipapo anofanira kuuraya mbudzi yechipiriso chezvivi chavanhu, ndokuuya neropa rayo mukati mechidzitiro, agoita neropa rayo sezvaakaita neropa renzombe, arisase pamusoro pechifunhiro chokuyananisa.
Dzikinuro ine chakavanzika zvakare. Zvinhu zviviri zvinofanira kuitwa. Mbudzi imwe inofanira kufa yorasa ropa rayo. Imwe mbudzi inofanira kutakura zvivi zvevanhu kuenda nazvo kure kure.
Jesu akapedza dambudziko iri kupfurikidza kuva Emanuweri, Mwari anesu.
Mwari ndiMweya saka kuzara kwehuMwari kwakagara mumuviri maJesu.
Paakafa, akabudisa mweya wake pakabuda Mweya Mutsvene mumuviri make.
JACOBO 2:26 Nokuti somuviri usina mweya wakafa, saizvozvo kutenda kusina mabasa kwakafa.
Muviri wake wenyama wakatora zvivi zvedu akadeura Ropa rake dzvene kusuka zvivi zvedu. Mweya mutsvene wake wakabva mumuviri wake ukatora zvivi zvedu kuenda nazvo kugehena akazvikandira kwazvakabva kuna Satani, anova baba vezvivi.
Saka Munhu mumwechete, Jesu, akaita zvaifanira kuitwa nembudzi mbiri. Akadeura Ropa rake risina mhosva (mhuka hadzina zvivi ndosaka achidaidzwa kunzi Gwaiana raMwari) akatakura zvivi zvedu kuenda nazvo kure kure, pasipasi pegehena kunosiya zvivi zvedu kuna Satani, anova mudzi wezvivi.
ISAYA 53:6 Isu tose semaKwai, takanga takarasika , takatsauka mumwe nomumwe nenzira yake , vuye JEHOVA akaisa pamusoro pake kuipa kwedu tose.
VAHEBERU 1:1 Mwari akataura kare kunamadzibaba muvaporofita nemigove mizhinji, vuye nemitovo mizhinji,
2 zvino pakupedzisira kwemazuva ano wakataura kwatiri muMwanakomana wake, waakaita mudyi wenhaka yezvinhu zvose, waakaita vo naye nyika;
3 Iye chadzera chokubwinya kwake, nomufananidzo wake chaiye, unotakura zvinhu zvose, neshoko resimba rake, wakati wanatsa zvivi iye pachena, akagara kurudyi rwovumambo kudenga.
Mweya waMwari usingaonekwi wakararama mumuviri weMunhu Jesu ukazviratidza nenzira yairarama Jesu maitiro ake nehunhu hwake. Maitiro aJesu aionesa nemashoko ake aitaridza Uyo aive Maari.
VAKOROSE 1:15 Ndiye mufananidzo waMwari usingaonekwi, dangwe rezvisikwa zvose.
JOHANE 3:34 Nokuti wakatumwa naMwari, ndiye unotaura mashoko aMwari, nokuti haapi Mweya achiyera.
Jesu ndiye aive kuzara kwehuMwari, mumuviri weMunhu. Mweya waMwari usingaonekwi waigara mukati meMunhu Jesu. Saka Jesu ndiye aive Munhu wenyama akashandiswa naMwari kuti azviratidze kurudzi rwevanhu.
Mumwewo munhu zvake, zvikuru sei, anokwanisa kungova nechikamu cheMweya waMwari.
JOHANE 4:24 Mwari ndiMweya: vanomunamata vanofanira kumunamata mumweya nezvokwadi.
Saka Jesu akabatanidza zvinhu zviviri zvaipesana kuzviisa pamwechete, Mwari neMunhu. Akatakura kuipa kwedu akatifira kuti atakure zvivi zvedu kunozvisiya kure saka nekudaro akava muranda kwatiri, asizve ari Ishe wedu uye tinofanira kuraramira kumubatira.
Chikamu chezvakavanzika zvaMwari ndechekuti muna Jesu tinowana zvinhu zviviri zvinorwisana zvisingakwanisi kusangana pane chero mumwe munhuwo zvake.
Akava chibairo chakafa asizve panguva imwechete mutakuri wezvivi anorarama.
Munhu anotyaira pamusoro pemvura kana kufamba pamusoro payo.
Munhu anofema mhepo kana kufamba achikwira mumhepo.
Munhu anodya chikafu kana kusika chikafu chakabikwa kare.
Saka maGwaro akagadzirirwa kuti asanganiswe pana Kristu, hunhu hunopesana zvachose hwakasangana paari.
Jesu munhu akafa asi akamukazve kubva kuvakafa. Hakuna umwe mukuru wezvitendero akagona kuita izvi.
DANIERI 7:13 Ndikaona pane zvandakaratidzwa usiku, ndikaona mumwe akafanana neMwanakomana achiuya namakore okudenga, akasvika kune akakwegura pamazuva ake, vakamuswededza pamberi pake.
Izvi zvinomiririra vanhu vaviri here izvi? Kana kuti kutsanangura maitiro kana hunhu sekunge munhu?
Hunhu huviri hunopesana hunobatanidzwa muna Kristu.
Ndiye mutongi asingazotyori nekudzikisira hwaro hwemurairo. Asizve ndiye Muponesi akadzikinura isu vatadzi vakakundikana kurarama pahwaro hwemurairo.
Hakuna mumwe munhu akakwanisa kubatanidza zvinhu izvi mumunhu mumwechete.
Mwanakomana wemunhu pasina kupokana ndiye Jesu.
MATEO 16:13 Jesu wakati asvika kumativi enyika yeKesaria Firipo, akabvunza vadzidzi vake akati, vanhu vanoti Mwanakomana womunhu ndianiko?
Wakakwegura pamazuva ake ndiani?
Hapana maGwaro anoti ndiMwari Baba.
Wakakwegura pamazuva angave Jesu here?
DANIERI 7:9 Ndikaramba ndakatarira kusvikira zvigaro zveushe zvagadzwapo, mumwe akakwegura pamazuva ake akagarapo; nguvo yake yakanga yakachena sechando, uye vhudzi romusoro wake rakanga rakaita samakushe akanatswa; chigaro chake choushe yakanga iri mirazvo yomoto, makumbo acho uri moto unopfuta.
10 Rwizi rwomoto rwakanga rwuchibuda rwuchibva pamberi pake; zviuru nezviuru zvakanga zvichimubatira, uye pamberi pake pakange pamire zviuru zvine gumi; kutonga kukatanga bhuku rikazarurwa.
Wakakwegura pamazuva ake mutongi. Ane bvudzi rakaita semakushe akanatswa. Mutongi aipfeka ngowani yebvudzi reshinda kuratidza kuti akanga ari pasi pesimba remurairo. Tsika yechinyakare iyi ichiri kuitwa kuEngland.
Nguwani yebvudzi reshinda inogadzirwa kubva pamakushe ehwai. Jesu ndiye Gwayana raMwari.
JOHANE 1:29 Ava mangwana vakaona Jesu achiuya kwaari, akati: Tarirai, Gwaiana raMwari, rinobvisa zvivi zvenyika.
ZVAKAZARURWA 1:13 Napakati pezvigadziko zvemwenje, mumwe wakafanana neMwanakomana womunhu, akafuka nguvo yakasvikira kutsoka, akazvisunga. napachifuva nebhanire rendarama.
ZVAKAZARURWA 1:14 Musoro wake nebvudzi rake zvakanga zviri zvichena samakushe machena, sechando; meso ake akaita semurazvo womoto;
Ngowani yebvudzi (wigi) yemutongi inogadzirwa neshinda inobva pamakushe ehwai.
Jesu ndiye Gwayana raMwari.
ZVAKAZARURWA 14:14 Ipapo ndakatarira, ndikavona gore jena, nomumwe wakaita soMwanakomana womunhu agere pamusoro paro, ane korona yendarama pamusoro wake naparuvoko rwake anejeko rinopinza.
Mwanakomana womunhu (Jesu) ane wigi yeshinda nejeko rekutonga kuti acheke vatadzi.
JOHANE 5:22 Nokuti Baba havatongi munhu, asi vakapa Mwanakomana kutonga kwose,
Saka Mutongi, Wakakwegura Pamazuva ake, haangavi Mwari Baba.
Saka kana wakakwegura pamazuva ake ari Mwari Baba uye Mwanakomana wemunhu, Muponesi wedu anova ani anomira parutivi rwake.
ISAYA 43:11 Ini iyeni, ndini Jehova kunze kwangu hakuna umwe muponesi.
Isaya anobuda pachena, hakuna umwe muponesi amire parutivi rwaMwari kumusoro kudenga.
Jesu angaonekwe sei amire parutivi rwaMwari kana Mwari asingaonekwe?
1 JOHANE 4:12 Hakuno munhu wakamboona Mwari;
Jesu angaonekwe sei amire parutivi rwaMwari asingaonekwe? Munhu mumwechete chete ndiye achange achionekwa, kwete vaviri.
ISAYA 45:21 Paridzai muzvibudise; zvirokwazvo , ngavarangane pamwechete, vachiti, Ndiani akazviratidza izvi kubvira panguva yekare-kare? Ndiani akazviparidza pakutanga? Handizini JEHOVA here? Hakuna mumwe Mwari kunze Kwangu, Mwari akarurama nomuponesi, hakuna mumwe kunze kwangu.
HOSEA 13:4 Kunyangwe zvakadaro ndini JEHOVA Mwari wako kubva panyika hamuzivi umwe Mwari asi ini, hakuna umwe muponesi kunze kwangu.
Haungafi wakatarisa kudenga ukaona muponesi amire parutivi rwaMwari.
JOBO 12:12 Vatana ndivo vakangwara, Vana mazuva mazhinji ndivo vanonzwisisa.
Mwari akava munhu kuti tione nekuziva kuti anokwanisa kunzwisisa kuti vanhu vanofunga sei nekuti akararamawo mararamiro atinoita mumatambudziko enyika, kusarurama kwayo hondo dzayo kusatenda kwayo, uye kupomera kwayo. Akasangana nazvo zvese izvi akakunda. Saka tinofanira kubvuma kuti anonzwisisa mamiriro akaita zvinhu kwatiri nekuti akasangana nezvakatoipisisa kupinda zvatakapindana nazvo isu.
Vatana zvinomiririra ruzivo rwakauya kupfurikidza kufamba kwemakore.
ISAYA 51:9 Muka muka zvifukidze nesimba iwe ruoko rwaJEHOVA; muka sepamazuva akare, sapamarudzi enguva dzakarekare. Ko hamuzimi makagura Rahabhi, mukakuvadza chikara here.
10 Ko hamuzimi makapwisa gungwa, nemvura dzakadzika, mukaitawo nzvimbo dzakadzika dzegungwa nzira pangayambuka vakadzikinurwa here?
Wakakwegura Pamazuva ake akaita minana kare paakavhura gungwa dzvuku achivhurira Mosesi nemaJuda aisvika mamiriyoni maviri kuti vadarike napakati pemvura uye anokwanisa kuzviita zvakare nhasi uno sezvo achiri munhu mumwechete haashanduke.
JOHANE 1:1 Pakutanga Shoko rakanga riripo, Shoko rakanga riri kuna Mwari , shoko rakanga riri Mwari.
Jesu ndiye Shoko raMwari. Saka Jesu akanga aripo kwenguva refu . Aive atovepo pakutanga kwenguva.
JOHANE 8:58 Jesu akati kwavari: zvirokwazvo zvirokwazvo ndinoti kwamuri: Abrahama asati avapo ini ndiripo.
Abrahama akadanwa kumakore anana 1921 BC.
Jesu aive atovapo kunyangwe nguva iyi isati yasvika.
DANIERI 3:25 Iye akapindura akati, Tarirai ndinoona varume vana vakasununguka vachifamba mumoto, vasina pavakakuvadzwa wechina pakuonekwa kwake wakaita seMwanakomana waMwari.
Jesu aive atovepo kumazuva aDanieri. Anogara aripo pese patinopinda mumatambudziko.
I PETRO 1:11 Vachinzvera kuti nguva ndeipi kana yakadii, yakataurwa noMweya waKristu, wakanga uri mukati mavo, nguva yaakapupura kare zvokutambudzika kwaKristu, nokubwinya kunozotevera izvozvo.
Saka Jesu aive mukati memaporofita ese ekare, achivatungamirira kuti vazadzise zvikamu zvidiki zvidiki zvezvakavanzika zvake zvichauya.
Semuenzaniso, Josefa akavengwa nevakoma vake vaida kumuuraya. Akapomerwa zvekunyepa kuEgipita. Akasungwa pamwe nevapari vemhosva vaviri, mubiki wechingwa akafa nemugadziri wewaaini akararama. Akazoenda mberi akanoponesa Egipita akaroora mukadzi muHedeni.
Jesu akavengwa nevekwake maJuda vakati ngaauraiwe. Akapomerwa manyepo pamberi paPirato. Akarovererwa pakati pevaive nemhosva vaviri. Mumwe akagamuchira Jesu akawana hupenyu husingaperi, mumwe akamuramba akafa akaenda kugehena. Rufu rwake rwunorangarirwa nezvinhu zviviri pachidyo chehusiko chaIshe (chinofanira kuitwa panguva dzehusiku sezvo chisiri chidyo chemangwanani). Chingwa chisina kuviriswa chePasiovha chinodimburwa semufananidzo wemuviri wake wakafa. Ndicho chikonzero nei mubiki wechingwa akafa. Waini chiratidzo chehupenyu huri muRopa rake hunova Mweya Mutsvene. Ndicho chikonzero nei mudiri wewaini, aipa Farao waini, akararama. Muporofita wega wega akatomboita chikamu chekurarama kwaKristu.
Enoki aive muporofita mvura yaNoa isati yauya, Kristu aive maari.
JUDHA 1:14 Enoki wechinomwe kubva kuna Adamu,wakaporofitira ivava, achiti: Tarira, Ishe wakauya navatsvene vane zvuru zvamazana.
Enoki, asina kubvira afa akatorwa kuenda kudenga achisiya mufananidzo wekukwira kudenga kwaJesu.
Jesu akakwira kudenga kunogara pachigaro chetsitsi apo paari muponesi wenyika, kune avo vanoda kumutambira. Uye achadzoka kuzotonga nyika ino.
Kupfuura mumakore 2 000 enguva dzemakereke manomwe arikudaidza Mwenga (chechi yake yechokwadi) kunyanya kubva kumarudzi emaHedeni.
GENESISI 5:24 Enoki akafamba naMwari: akasazovapo nokuti Mwari wakamutora.
Saka Kristu ndiye Wakakwegura. Asi haachemberi nekuti anorarama kunze kwenguva.
ZVAKAZARURWA 1:15 Tsoka dzake dzakanga dzakafanana nesafuri inopenya, inenge yakanatswa muviri; inzwi rake rakanga rakaita senzwi remvura zhinji.
Tsoka dzake dzakafamba mumoto wegehena paakatora zvivi zvedu kunozvirasira pana Satani.
ZVAKAZARURWA 1:5 Nokuna Jesu Kristu, chapupu chakatendeka, dangwe kuvakafa, mubati wamadzishe enyika. Kuna iye wakatida akatisuka, pazvivi zvedu neropa rake.
MAPISAREMA 85:10 Ngoni nezvokwani zvakasangana, Kururama norugare zvikatsvodana.
Kwete vanhu vaviri. Kuita kuviri kwakasangana muna Kristu. Kufananidzwa kwehunhu nemunhu, sekunge ngoni nechokwadi zvaive vanhu vaviri vakasiyana.
Wakwegura Pamazuva ake ndiye Mutongi anoziva uye anoda chokwadi. Mwanakomana wemunhu ndiye murevereri anotinzwisisa achitimiririra.
Anoziva kuti tiri vatadzi asi zvakadaro akaripira zvivi zvedu saka anokwanisa kutisuka kuti tive vakachena.
Haatenderi kuderedza hwaro hwemurairo (seMutongi) asi nekuti akaripira matadzo edu anokwanisa kutisuka kubva kutsvina yezvivi.
I JOHANE 2:1 Vana vangu vaduku, ndinokunyorerai zvinhu izvi, kuti, murege kutadza. Kana munhu achitadza tinoMurevereri kuna Baba, iye Jesu Kristu wakarurama;
Murevereri – munhu anokumbirira mumwe munhu pamberi pemutongi.
Mutongi anogarira kuchengetedza hwaro hwemurairo uye Murevereri anomirira kupupurira ane mhosa anenge atendeuka uye ari kukumbira ruregerero.
DANIERI 7:21 Ndakatarira, ndikaona runyanga urwu rwuchirwa navatsvene, nokuvakunda.
22 Kusvikira Akakwegura Pamazuva ake achisvika, vatsvene voWokumusoro-soro vakaruramiswa, nguva ikasvika yekuti vatsvene vapiwe ushe.
NdiJesu ari kuuya.
1 MADZIMAMBO 10:4 Zvino mambokadzi weShebha wakati waona kungwara kwose kwaSoromoni, neimba yaakanga avaka;
Mukadzi anomiririra kereke. Mwenga waKristu.
St Pauro aidaidza kereke kuti mukadzi.
Soromoni mwanakomana waDavidi akawana uchenjeri akavaka imba.
Jesu, Mwanakomana mukuru waDavidi, akava nehuchenjeri nekuva kwake pane rino pasi kwemakore ane zvuuru nezvuuru ekurarama kwerudzi rwevanhu panyika akadana Mwenga kupfuura nemumakereke manomwe apo nguva yega-yega yekereke yaive nedambudziko rayo. Kereke yechinomwe pamakereke ese enguva nomwe akararama inofanira kuzodzokera pakuita kwekereke yekutanga (apo izwi rekuti pasita “mufudzi” rakataurwa kamwechete chete saka haafaniri kutonga kereke) uye dambudziko redu guru kune marudzi echichechichechi (churchianity) saka tinofanirwa kutsvaga chokwadi kupfurikidza kudzokera kuBhaibheri, kwete kupanana zvatinofunga.
MATEO 1:1 Mazita emadzitateguru aJesu Kristu Mwanakomana waDavidi,
ZVIREVO 9:1 Uchenjeri hwakavaka imba yahwo; Hwakaveza mbiru dzahwo nomwe.
1 MAKORONIKE 28:11 Ipapo Davidi akapa mwanakomana wake Soromoni mufananidzo webiravira reTemberi, nedzimba dzaro, nezvivigiro zvefuma yaro, namakamuri aro ekumusoro, mamakamuri aro omukati, neimba yechifunhiro chokuyananisa;
12 Nemifananidzo yezvose yakanga iri mumweya wake, yevazhe dzeimba yaJEHOVA, neyamakamuri ose anokomberedza, neyezvivigiro zvefuma yenhumbi dzakatsaurwa.
Murume aizovaka aifanira kutora mufananidzo kubva kuna baba vake. Aisakwanisa kutevera huchenjeri hwake iye.
VAROMA 8:14 Nokuti vose vanotungamirirwa noMweya waMwari, ndivo vana vaMwari.
1 VAKORINTE 3:16 Ko hamuzivi here kuti muri tembere yaMwari, vuye kuti Mweya waMwari unogara mukati menyu here?
Baba vedu veMweya Jesu chete, vanova Shoko, ndivo vanokwanisa kutitungamirira kuti tivake Temberi yeMweya yekereke yaMwari yechinomwe.
Temberi inodiwa naMwari, kwete yatinoda isu.
Hurongwa hwaMwari, kwete hurongwa hwangu hwekuzvifungira ini ndega.